China MS alimina alim-baravaran-tsambo asynchronous maotera sy mpamatsy | Leadrive
MS alim-ponenana môtô asynchronous dingana telo
Ny haben'ny fametrahana sy ny fahombiazan'ny herinaratra an'ny andian-tsarimihetsika boribory boribory vita amin'ny alimo dia mitovy amin'ny an'ny motera vy vy. Izy ireo dia manana ny mampiavaka ny famolavolana tantara, ny fisehoany tsara tarehy, ny firafitra matevina, ary ny fikojakojana mety.
Ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana milina, mpankafy, paompy rano, reducers ary indostria hafa. Izy io dia vokatra nohavaozina maotera maotera tsotra.
◎ Frame No: 63-160
Class Kilasy insulation: F
Way Fomba fiasa: S1
Level Haavo fiarovana: IP55
Previous: IE3 andian-dahatsoratra avo-avo fahombiazan'ny maotera asynchronous dingana telo
Manaraka: Rosiana manara-penitra môtô (Power Base kely ambony)